Mandeha amin'ny fomba ofisialy ny sarimihetsika Harry Potter | Famoronana an-tserasera
Raha toa efa miomana ny zava-drehetra boky vaovao havoaka an'i Harry Potter, vaovao mbola tsy maintsy hamafisina ary izany dia hitarika an'i Harry amin'ny tantara iray mizara roa ary napetraka 19 taona taorian'ny faran'ny Harry Potter sy ny toerana mahafaty, Tsara hatrany ny mamerina ny fomba fijery miaraka amina andian-tsary izay mametraka antsika alohan'ny olona manan-danja indrindra amin'ity saga ity.
Alohan'ny kinova ofisialy ofisialy ny tarehin-tsoratra Harry Potter hanehoana amin'ny fomba hafa ny toetra ara-batana misy ny protas tsirairay amin'ity saga avo lenta noforonin'i JK Rowling ity. Tahaka ny fidirana hafa, na dia ireo maro hafa aza avy amin'ny mpankafy iray izay naneho ny toetrany ireo mpilalao tiany tamin'ny fomba iray toa izay hitranga Raha nanao ny sarimihetsika Disney i Tim Burton, izao dia manana fialamboly manana fahazoan-dàlana mahafinaritra avy any Warner Bros.
Ny hany mahatsara azy ireo dia izy ireo tsy misy afa-tsy any Japon izay toerana nalain'i Warner Bros fahazoan-dàlana ho an'ny andiany Harry Potter. Azonao atao koa ny mahita ireo gidro Harry Potter karazan-tsarimihetsika amin'ny karazan-javatra rehetra toy ny famafana, rojo vy na bokotra na dia.
Ny endrika amam-panahy dia vita tsara ary mandeha mivantana any amin'ny anime izy ireo mba ho anisan'ny fivarotana an'io saga io any amin'ny firenena Japoney izay hahitan'izy ireo fomba hampitomboana ny varotra. Ny marina dia iza no tsy te-hahita dikanteny anime misy tantara an-tsary miaraka amin'i Harry Potter sy ireo tarehintsoratra aseho amin'ny fomba toy izany. Azo antoka fa ho fahombiazana lehibe.
Toy izany koa, na dia tamin'ity indray mitoraka ity aza, mpankafy ny andiany, Toetran'ny Game of Thrones como el raha izy ireo no mpandray anjara fototra avy amin'ny sarimihetsika Disney malaza indrindra.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » Inspiration » Ny kinova anime ofisialin'ny endri-tsoratra Harry Potter
Rapunzel amin'ny solika avy amin'i Aaron Miller